Umatshini wokudaya, umatshini weNapkin, umatshini weTissue - PEIXIN
IQELA LENKUNDLA YANGAPHAKATHI
Uhlala ubeka umgangatho kwindawo yokuqala kwaye ujonge ngokungqongqo umgangatho weemveliso zazo zonke iinkqubo.
I-ISO9001: 2000, ISiqinisekiso seEC
Umenzi oqeqeshiweyo weMveliso yokucoceka yokulahla ngaphezulu kweminyaka engama-30.
I-FUJIAN PEIXIN IMANYANO YOKUFUNDISA I-COCHIN CO, LTD.
Iqela lehlabathi liphela li-Shuangyang Overseas Chinese Economic-Development Zone, Luojiang District, Quanzhou. I-PEIXIN lelinye lamashishini amakhulu eTshayina akhethekileyo kwimigca yemveliso enikezelwe kwimveliso yezempilo esetyenziswa imihla ngemihla.
Yasekwa ngonyaka ka-1985 kwaye igubungela ngaphezulu kwe-50 000 yeemitha zeemitha zomhlaba, iphantse ibe ngama-20, 000 eemitha zommandla womveliso. Owona msebenzi wethu uphambili kubugcisa. Siqeshe ngaphezulu kwe-450 yabasebenzi, kubandakanya ne-150 yeengcali ezikhethekileyo nabasebenzi be-R&D. Sityala imali ngakumbi nangakumbi kuphando nakuphuhliso kunye nokumilisela iinkqubo eziphambili zolawulo kuba sihlala sifuna ukuqhubeka kwinqanaba elinye.
Umgca wokuGqibezela uLawulo lweMveliso yeZilwanyana eziNgoqo kumNxeba
Ukhuseleko lwe-Servo egcweleyo yoKhuseleko-ukuvuza ukuCocwa kweNqanawa yeSankin
Ulawulo olupheleleyo lweServo eSebenzayo yaDala yaBadala
I-Full-servo eSebenza ngokugqibeleleyo umGqibelo weNdawo yokuFakelwa kweDihlekile yeNdlebe (isiTayile)
I-Peixin yathatha inxaxheba kwiTekhnoloji ye-Non Woven ...
Ukususela nge-6 kaJuni ukuya nge-8 kaJuni, i-Non Woven Tech Asia Fair yayibanjelwe eDelhi. Njengomnye wabathengisi abanobuchwephesha, Iqela le-PEIXIN laba likhulu nangakumbi. Besivuya kakhulu ukuba ...
UPeixin uthathe inxaxheba kwi-TECHNOTEX 2018 ...
Ukususela nge-28 kaJuni ukuya nge-29 kaJuni, iTechno Tex India Fair ibibanjelwe eMumbai. Njengomnye wabathengisi abanobuchwephesha, Iqela le-PEIXIN laba likhulu nangakumbi. Sivuya kakhulu ukuba sifumene ...
I-Peixin yathatha inxaxheba kwi-ANDTEX 2019 kwi-Ban ...
I-AndTEX i-2019 ngumsitho apho ii-nonwovens kunye nabavelisi beemveliso zokwenza injineli, abaphandi, abasebenzisi kunye neenkokheli zecandelo ezivela kwihlabathi liphela bahlangana ukukhangela ubutyebi bamashishini amatsha ...
UPeixin uthathe inxaxheba kwi-IDEA ngo-2019 enga ...
I-IDEA® 2019, umsitho ophambili kwihlabathi labangenanto kunye neengcibi zeenjineli, wamkele abathathi-nxaxheba abangama-6 500+ kunye neenkampani ezibonisa ezingama-509 ezivela kumazwe angama-75 kuyo yonke i-nonwovens ...
Kwi-PEIXIN, ukuqasha imalunga nabantu hayi inkqubo. Kukuzimisela kwexesha elide okuchonga ngokwenyani abantu abaya kuthi basebenzise amaqela ethu ngokwahluka kwabo, amava kunye nembono yabo.
panty wesampula Production Line , Daily Ucoceko Machine , Mini Pad Production Line , Lady Pad Machine , uTsalo Up Machine , Wet esisula Machine ,